May 11, 2012 မုိုးမခပေးစာ၊ မေ ၁၁၊ ၂၀၁၂
နာရီအနည်းငယ်နောက်ကျပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပါပြီ။ သင်္ကြန်အလွမ်းပြေ နေ့တိုင်း Skynet ကိုပဲ ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်လိုပဲ အတာသင်္ကြန်ကို အလွမ်းပြေကြည့်ဖို့အတွက်ပါ။ အရင်ဆုံး ဒီလင့် လေးကိုသွားပြီး ဒေါင်းလော့ချပါ။ ပြီးရင် run ပါ။ run ပီးတဲ့အခါမှာ Search channel ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ 99221 ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ကြည့်လို့ရပါပြီ။ နက်ကောင်းရင် ကောင်းသလောက် ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီ Channel လေးက နေ့တိုင်းထုတ်လွင့်ပေးပါတယ်။ သတင်းတွေကိုလည်း ကြေငြာပေးပါတယ်။ xxx “
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:မိုးမခကို ပေးတဲ့စာ	4 Responses to ပြည်တွင်းက Sky Net Myanmar ကို ပြည်ပမှာ အင်တာနက်ကနေ ကြည့်ဖို့ – weblink More Kyi Lwin on May 11, 2012 at 1:18 pm thanks
search on May 11, 2012 at 7:03 pm Try, Try, you can see myanmar channel online. but U need to try search. there are many chanel online for myanmar.
THEIN on May 11, 2012 at 10:01 pm THANKS…..
BO BO AUNG on May 12, 2012 at 11:28 am No match found for channel 99221?????????
မောင်တူး - သက်ရှိပန်းချီ - အပိုင်း (၁၇)	HTC One M9 မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်	စောဝေ - အဖေတူသားများ	ကာတွန်း လိုင်လုဏ် - ကြိုဆိုနေသူတွေ	မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး သရုပ်ဆောင်သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ပြုလုပ်	ကိုသန်းလွင် - ကျောင်းကောင်စီ	ဆောင်းလူ - အပြာကား	1MB ကို ၆ ကျပ် ပဲကောက်ခံမည့် အူရီဒူး ရဲ့ “ ဖလန်းဖလန်းအင်တာနက်”	ကာတွန်း လိုင်လုဏ် - မီးလင်းကုန်ပြီ	မောင်စိုးချိန် - ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၈)	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများစပယ် - ရကောက် ရထားကြီး ပျော်ပျော်စီး (အပိုင်း သုံး)
စာပဒေသာ ကောက်စာများကျနော် စိတ်အချဉ်ပေါက်ခြင်း